စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပညာရေး in ကေနဒါ ကနေဒါတွင်လေ့လာလိုသောကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ် of ကေနဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတဆင့် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ကေနဒါလည်းအဖြစ်လူသိများ, ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ကေနဒါ ကျောင်းသားများအတွက် ပြည်ပမှာလေ့လာမှု in ကေနဒါအဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေး in တိုရွန်တို သို့ လေ့လာချက် in တိုရွန်တို in တက္ကသိုလ်က of တိုရွန်တို ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ တိုရွန်တို ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ တိုရွန်တို ပညာရေး in မွန်ထရီရယ် သို့ လေ့လာချက် in မွန်ထရီရယ် in တက္ကသိုလ်က of မွန်ထရီရယ် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ မွန်ထရီရယ် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ မွန်ထရီရယ် ပညာရေး in calgary သို့ လေ့လာချက် in calgary in တက္ကသိုလ်က of calgary ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ calgary ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ calgary ပညာရေး in Winnipeg သို့ လေ့လာချက် in Winnipeg in တက္ကသိုလ်က of Winnipeg ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Winnipeg ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Winnipeg ပညာရေး in ဗန်ကူးဗား သို့ လေ့လာချက် in ဗန်ကူးဗား in တက္ကသိုလ်က of ဗန်ကူးဗား ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဗန်ကူးဗား ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဗန်ကူးဗား ပညာရေး in ကွီဘက် သို့ လေ့လာချက် in ကွီဘက် in တက္ကသိုလ်က of ကွီဘက် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ကွီဘက် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ကွီဘက်.
အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ကနေဒါ | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in တိုရွန်တို | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in မွန်ထရီရယ် | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in calgary | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Winnipeg | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဗန်ကူးဗား | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ကွီဘက်
ပညာသင်နှစ် (စက်တင်ဘာ - ဇွန်)
ကေနဒါ မြောက်အမေရိက၏မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပညာအရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များနှင့်ကျောင်းများအတွက်နေရာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာပညာအရှိဆုံးနိုင်ငံပါ။
ကနေဒါနိုင်ငံတွင်အဓိကအားဖြင့်ပြည်နယ်များထိန်းချုပ်ထားသောပြည်သူ့ပညာရေးအစီအစဉ်ရှိပြီးအားကောင်းသောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရှိသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ပညာရေးစနစ်၏အချို့သောအချက်များသည်ပြည်နယ်နှင့်တစ်ခုအကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်ပညာရေးကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပညာရေးအရည်အသွေးသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိမြင့်မားသည်။ တစ် ဦး ချင်း ကနေဒါလေ့လာနေ ထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုပညာရေးကိုရယူခြင်း၊ ကနေဒါသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ကနေဒါတွင်လေ့လာပါ
ကနေဒါတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း ကနေဒါပညာရေး | ကနေဒါနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပညာသင်ပါ
တိုရွန်တိုရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Montreal ရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Calgary ၌ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Winnipeg တွင်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ဗန်ကူးဗားတွင်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ကွိဘက်၌နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | တိုရွန်တိုရှိပညာရေး | Montreal ရှိပညာရေး | Calgary တွင်ပညာရေး | Winnipeg အတွက်ပညာရေး | ဗန်ကူးဗားပညာရေး | ကွိဘက်ရှိပညာရေး
ကနေဒါသည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပညာသင်ကြားရန်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ၄၅၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည် ကနေဒါလေ့လာနေပို။ ပို။ ကြီးထွားလာသောနံပါတ်။ ထိုကျောင်းသားများသည်ကနေဒါကိုအခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထက် ပို၍ နှစ်သက်ကြသည် ကနေဒါလေ့လာနေ.
ကနေဒါနိုင်ငံသည်ကောလိပ်များ၊ Polytechnics နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျောင်းများအားပညာရေးပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပေးထားသည်။ ပိုမိုစနစ်ကျပြီးလက်တွေ့ကျသောသင်ယူမှုအတွက်ဤဆန်းသစ်သောမူဘောင်သည်စာသင်ခန်းအခြေပြုပညာရေးနှင့်လက်တွေ့အလုပ်အတွေ့အကြုံများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဟောပြောပွဲကိုအခြေခံသည့်ပညာရေးတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမသုံးစွဲလိုသောနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်က။ ကျောင်းသားများအားပေးသောဘွဲ့များသည်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့၊ ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာနှင့်ဒီဂရီ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဂရီနှင့်ကနေဒါတက္ကသိုလ်များတွင်ပါရဂူဘွဲ့များဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များဖြေ - တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များမှပေးသောသင်တန်းများတွင်ဒီပလိုမာနှင့်တက္ကသိုလ်ပြောင်းခြင်းအစီအစဉ်များပါဝင်သည်။
ရပ်ရွာကောလိပ်များရပ်ရွာကောလိပ်များတွင်ကျောင်းသားများသည်လက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာ၊ တွဲဖက်ဘွဲ့၊ ဘွဲ့ကြိုဒီဂရီနှင့်ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာများရရှိနိုင်သည်။
အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာကောလိပ်များဖြေ - နည်းပညာဆိုင်ရာသင်ကြားမှုအတွက်လက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာ။
တက္ကသိုလ်များသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရန်လျှောက်လွှာကိုတက္ကသိုလ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရယူပါ။ သီးခြားလျှောက်လွှာပုံစံကိုတစ်ခုထက်ပိုသောလျှောက်ထားလိုသောကျောင်းသားများကဖြည့်စွက်သင့်သည် ကနေဒါတက္ကသိုလ်။
ထောက်ခံစာ (၂-၃ အကြား)၊
အစုစုနှင့် / သို့မဟုတ် SOP
ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ကနေဒါရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | ကနေဒါနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်စရိတ်
တိုရွန်တိုတွင်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Montreal တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Calgary တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Winnipeg တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဗန်ကူးဗားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ကွီဘက်၌နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | တိုရွန်တိုတွင်နေထိုင်သောတွက်ချက်မှုနှုန်း | Montreal ရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုကုန်ကျစရိတ် | Calgary တွင်နေထိုင်ရန်တွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Winnipeg တွင်နေထိုင်သည် | ဗန်ကူးဗားရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် | ကွိဘက်ရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်
ကနေဒါအဆင့်မြင့်ပညာရေး အလွန်အလွတ်သဘောဟုမှတ်ယူထားသည်။ တက္ကသိုလ်အဆင့်ကျောင်းသားများသည်တက်ရောက်မှု၊ အစီအစဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဆင့်အတန်းရှိသည်။
ဒီဂရီသင်တန်းများသည်များသောအားဖြင့်ဆွေးနွေးမှုကိုအခြေခံသည့်၊ ဟောပြောပို့ချခြင်းပုံစံကိုအဓိကထားသောအတန်းများဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည်ပုံမှန်သင်ကြားမှုပုံစံစာသင်ခန်းများအထူးသဖြင့်ကျောင်းသားအများစုရှိသည့်ခေါင်းစဉ်များကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။ သင်တန်းများကိုမည်ကဲ့သို့စီစဉ်ထားသည်ဆိုသည်မှာသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကနေဒါတွင်သင်၏အဆင့်၊ တက္ကသိုလ်၊ စည်းကမ်းနှင့်မူရင်းနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ အခကြေးငွေအမျိုးမျိုးရှိသည်။
အစိုးရတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျူရှင်နှုန်းသည်တစ်နှစ်လျှင် ၇၅၀၀ မှ ၂၂၅၅၀၀ အကြားခြားနားပြီးပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျူရှင်မှာမူပိုမိုမြင့်မားသည်။
ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်မှာတစ်လလျှင် ၁၀၀၀ မှ ၁,၇၀၀ CAD ဖြစ်သည်။
ကနေဒါရှိအိပ်ခန်းသုံးခန်းပါတိုက်ခန်းသည်တစ်လလျှင်ယူရို ၁၂၀၀ ကုန်ကျမည်
ဝိုင်ပုလင်း: ၁၀ ယူရို
ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ | ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာ ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားရန်ကနေဒါ
လျှောက်ထားသူသည်ဒီဂရီမစတင်မီအနည်းဆုံး ၂ လမှ ၃ လအထိလျှောက်ထားသင့်ပြီးအကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ သို့မဟုတ်စက္ကူပေါ်တွင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သင်၏တစ် ဦး ချင်းလျှောက်လွှာအပေါ်မူတည်။ လျှောက်ထားသူသည်ဆေးစစ်ရန်အတွက်ဗီဇာအတွက်နှစ်ကြိမ်၊ ဗီဇာနှင့်အင်တာဗျူးခြင်းပြုလုပ်ရမည်။
လျှောက်ထားသူများသည်သင်၏လျှောက်လွှာရှင်၏ဘဏ်အကောင့်တွင်လစဉ်အနည်းဆုံးယူရို ၃၀၀၀ ကိုပြသခြင်းအားဖြင့်ငွေကြေးအထောက်အပံ့အထောက်အထားကိုတင်ပြသင့်သည် ကနေဒါမှာနေ.
ကနေဒါရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ကနေဒါကျောင်းသားများ၏ဗီဇာအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ကနေဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်လေ့လာမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုပါကအလုပ်ပါမစ်လိုအပ်သည် ကနေဒါတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျောင်းသားသည်သင်၏တက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်ကျောင်းပြင်ပရှိကျောင်းဝင်း၌အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ် (SIN) ရသင့်သည်။
ချင်သောကျောင်းသားများ ကနေဒါတွင်အလုပ်လုပ်သည် လေ့လာမှုများပြီးဆုံးလျှင်၊ နောက်ထပ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားရန်လိုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကနေဒါတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရပြီးနောက် ၃ နှစ်အထိဒီမှာအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအရကနေဒါတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ရက်ပေါင်း ၉၀ ခန့်ကြာသည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာ ၁၆၇ ယူရိုဖြစ်ပြီးဤအလုပ်ပါမစ်တွင်အလုပ်အတွက်အချိန်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။
စဉ် ကနေဒါတွင်အလုပ်လုပ်သည် အနည်းဆုံးလစာ ၁၆၀၀ နှင့် ၂၄၀၀ CAD / လအတွက်အာမခံထားပြီးအလုပ်နှင့်သင်အလုပ်လုပ်မည့်ပြည်နယ်အပေါ်မူတည်သည်။
သို့ ကနေဒါတွင်လျှောက်ထားပါ တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများရှိသင့်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသည့်တက္ကသိုလ်၏လျှောက်လွှာပုံစံကိုစနစ်တကျဖြည့်စွက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ တက္ကသိုလ်များသည်သင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ယခင်အရည်အချင်းများ၊ ဘဏ္informationာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလိုအပ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်၏တစ် ဦး ကြင် - ရေးသားထားသောအက္ခရာ
အင်္ဂလိပ် (သို့မဟုတ်ပြင်သစ်) ကျွမ်းကျင်မှု၏သက်သေ
ကျောင်းသား၏တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ရန်နေထိုင်မှုစရိတ်များပါ ၀ င်သည့်အထောက်အထား
အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများအချို့အားဖြင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ကနေဒါတက္ကသိုလ်များ လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်။ ။ ပရိုဂရမ်သည်မည်သည့်အထူးပြုမှုအတွက်မဆို GRE၊ GMAT သို့မဟုတ် LSAT ကဲ့သို့သောနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ရမှတ်များလိုအပ်ပါက။ ထိုအခါရမှတ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများသည် IELTS, CAEL, CanTest, MELAB, TOEFL သို့မဟုတ် C1 အဆင့်မြင့်ဘာသာစကားလက်မှတ်များဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကိုသက်သေပြရမည်။ ရမှတ်များသည်သတ်မှတ်ထားသည့်အနည်းဆုံးဘာသာစကားရမှတ်ဖြစ်သင့်သည် ကနေဒါတက္ကသိုလ်များ.
ကနေဒါပညာရေး | ငါတို့တစ်နေရာတည်း ကနေဒါပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ကနေဒါတက္ကသိုလ် နှင့်အခြား 105 နိုင်ငံများ ကနေဒါအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် တိုရွန်တို၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Calgary တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Winnipeg အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဗန်ကူးဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကွိဘက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ကနေဒါလေ့လာမှု ဖုံးလွှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခု၊ ကနေဒါပညာရေးအပါအဝင် တိုရွန်တိုပညာရေး | Montreal ရှိပညာရေး | Calgary တွင်ပညာရေး | Winnipeg အတွက်ပညာရေး | ဗန်ကူးဗားပညာရေး | ကွိဘက်ရှိပညာရေး ).
စျေးသက်သာသောစိတ်ကြိုက်ပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါ၌တည်၏ ကနေဒါထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ကနေဒါနိုင်ငံရပ်ခြားရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ကနေဒါထိပ်တန်းသင်တန်းများ, ကနေဒါရှိထိပ်တန်း MBA ကောလိပ်များ, ကနေဒါရှိထိပ်တန်း MS ကောလိပ်များ, ကနေဒါရှိထိပ်တန်း UG စီးပွားရေးကျောင်းများ, ကနေဒါရှိထိပ်တန်း MBBS ကောလိပ်များ နှင့်ကနေဒါအများအပြားပိုပြီးသင်တန်းများ။
ငါတို့နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်းလူသိများ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေး ကနေဒါမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါမှာ။
ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း * ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအတွက်အားမပေးပါ အခမဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါတက္ကသိုလ်ဘို့ နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဒါ့အပြင်လူသိများကနေဒါ, နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနှင့် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်
တိုရွန်တိုရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Montreal ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Calgary ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Winnipeg ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ဗန်ကူးဗားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ကွိဘက်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | တိုရွန်တိုရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Montreal ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Calgary ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Winnipeg ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ဗန်ကူးဗားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ကွိဘက်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ
ကျောင်းသားတိုင်ပင်ဆွေးနွေး - ပညာရေးကနေဒါ
ပညာရေးအတွက်စီစဉ် ကနေဒါမှာ, တက္ကသိုလ်များအတွက်ဝင်ခွင့် ကနေဒါ၏ကနေဒါတွင်လေ့လာရန်
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ဘယ်သူလိုအပ်တယ် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဘို့ ကေနဒါဘယ်လိုလုပ် ဝန်ခံချက်ရ in ကေနဒါ in ကနေဒါတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ကနေဒါပညာရေး သို့မဟုတ် ကနေဒါတွင်လေ့လာသည်, တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်များ ဘို့ တိုရွန်တိုရှိပညာရေး သို့မဟုတ် တိုရွန်တိုတွင်လေ့လာသည် , Montreal ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ Montreal ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် Montreal တွင်လေ့လာသည်, Calgary တက္ကသိုလ်များ ဘို့ Calgary တွင်ပညာရေး သို့မဟုတ် Calgary တွင်လေ့လာသည် , Winnipeg အတွက်တက္ကသိုလ်များ ဘို့ Winnipeg အတွက်ပညာရေး သို့မဟုတ် Winnipeg တွင်လေ့လာပါ, ဗန်ကူးဗားရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဗန်ကူးဗားပညာရေး သို့မဟုတ် ဗန်ကူးဗားတွင်လေ့လာပါ, ကွိဘက်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ကွိဘက်ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ကွီဘက်၌လေ့လာသည် ကျနော်တို့အပါအဝင်ကနေဒါအဖြစ်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံယူကြပြီ, တိုရွန်တိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Montreal ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Calgary ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Winnipeg အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဗန်ကူးဗားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကွိဘက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုနှင့်မိတ်ဖက်စုံလင်အတွက် ကနေဒါတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် တိုရွန်တို၌အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Montreal တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Calgary တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Winnipeg တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်ရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကနေဒါရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များ အပါအဝင်ကနေဒါတွင်လေ့လာရန် တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်များ , Montreal ရှိတက္ကသိုလ်များ , Calgary တက္ကသိုလ်များ , Winnipeg အတွက်တက္ကသိုလ်များ , ဗန်ကူးဗားရှိတက္ကသိုလ်များ , ကွိဘက်ရှိတက္ကသိုလ်များ နှင့်လည်းအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ 106 နိုင်ငံများ ထောက်ပံ့ရန် ကနေဒါပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့ရန်မြို့ကြီး ၃၂၆ ရှိနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအပါအ ၀ င်ကနေဒါနိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ တိုရွန်တိုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Montreal အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Winnipeg အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ဗန်ကူးဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ကွိဘက်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့်တိုရွန်တိုအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသား ၃၂၆ မြို့၊ မွန်ထရီရယ်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ Calgary အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ၊ Winnipeg အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ ဗန်ကူးဗားအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊
ကနေဒါအတွက်နေထိုင်ရန်ဂဏန်းတွက်စက် နားလည်ရန် ကနေဒါကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ် အပါအဝင် တိုရွန်တိုအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် တိုရွန်တိုကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုစရိတ် , Montreal အတွက်နေထိုင်ရန်ဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် Montreal ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, Calgary အတွက်နေထိုင်ရန်ဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် Calgary ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် , Winnipeg အတွက်နေထိုင်ရန်ဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် Winnipeg ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဗန်ကူးဗားအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဗန်ကူးဗားရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ကွိဘက်အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ကွိဘက်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ကနေဒါပညာရေး နှင့်အကြောင်းပြချက် ကနေဒါကိုလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်သင်ဆက်သွယ်မည် ကနေဒါကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ထို့အပြင်ဆိတ်ကွယ်ရာအခြားနိုင်ငံများအကြံပြုအပ်ပါသည် <="" p="">
သင်၏ကနေဒါ၌လေ့လာရန်သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါတွင်ကျောင်းသား၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်ဖြတ်သန်းလိမ့်မည် ဗီဇာ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ကနေဒါအတွက်၊ ကနေဒါတွင်ဝင်ခွင့်ရ in ကနေဒါတက္ကသိုလ် သို့ ကနေဒါတွင်လေ့လာသည် ဘို့ ကနေဒါပညာရေး, ဝင်ခွင့် တိုရွန်တို in တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ် သို့ တိုရွန်တိုတွင်လေ့လာသည် ဘို့ တိုရွန်တိုပညာရေး , ဝင်ခွင့် မွန်ထရီရယ် in Montreal ရှိတက္ကသိုလ် သို့ Montreal တွင်လေ့လာသည် ဘို့ မွန်ထရီရယ်အတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် calgary in Calgary တက္ကသိုလ် သို့ Calgary တွင်လေ့လာသည် ဘို့ Calgary မှာပညာရေး , ဝင်ခွင့် Winnipeg in Winnipeg အတွက်တက္ကသိုလ် သို့ Winnipeg တွင်လေ့လာပါ ဘို့ Winnipeg အတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဗန်ကူးဗား in ဗန်ကူးဗားတက္ကသိုလ် သို့ ဗန်ကူးဗားတွင်လေ့လာပါ ဘို့ ဗန်ကူးဗားအတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ကွီဘက် in ကွိဘက်ရှိတက္ကသိုလ် သို့ ကွီဘက်၌လေ့လာသည် ဘို့ ကွိဘက်ရှိပညာရေးသင့်အနေဖြင့်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
သင်စီစဉ်ထားလျှင် ကနေဒါလေ့လာမှုငါတို့၏ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ in ကေနဒါ သင့်အတွက်လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ် ကနေဒါတွင်ဝန်ခံချက် မင်းတို့ကနေဒါမှာပညာသင်ဖို့အတွက်သူတို့မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိကြတယ် အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ကေနဒါ အပါအဝင် တိုရွန်တိုကျောင်းသားများဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း Montreal ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း Calgary ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း Winnipeg အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ဗန်ကူးဗားရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ကွိဘက်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဝင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တွဲဖက် ကေနဒါ မင်းကိုကူညီနိုင်တယ် တိုက်ခန်းရှာခြင်း or ဘော်ဒါဆောင် ငှားရန်ရှိသည် ကေနဒါ.
ကျွန်တော်တို့၏ ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သင့်တော်တဲ့အရာကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ် တက္ကသိုလ် ကနေဒါမှာ။
ငါတို့အသင်း ကနေဒါပညာရေး သင်လိုအပ်ကောင်းကူညီနိုင်မည့်မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုသင့်အားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည် ကနေဒါတွင်လေ့လာသည်သင်ချွေတာရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျမှု ကနေဒါပညာရေး။
အောင်မြင်သည် အတွက်ဝင်ခွင့် ကေနဒါ အတွက်လေ့လာနေသည် ကေနဒါမြို့များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် တိုရွန်တိုရှိကျောင်းဝင်ခွင့် ဘို့ တိုရွန်တိုတွင်လေ့လာသည် , Montreal အတွက်ဝင်ခွင့် ဘို့ Montreal တွင်လေ့လာသည်, Calgary တွင်ဝင်ခွင့် ဘို့ Calgary တွင်လေ့လာသည် , Winnipeg အတွက်ဝင်ခွင့် ဘို့ Winnipeg အတွက်လေ့လာနေ, ဗန်ကူးဗားအတွက်ဝန်ခံချက် ဘို့ ဗန်ကူးဗားတွင်လေ့လာနေသည်, ကွိဘက်၌ဝန်ခံချက် ဘို့ ကွိဘက်မှာလေ့လာနေ
ရန်စီစဉ်လျှင် ကနေဒါလေ့လာမှုထို့နောက်ရွေးစရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည် ကနေဒါမှမိတ်ဖက် ကနေဒါ၌သင်ဝန်ခံချက်အဘို့, ငါတို့မှာ ထုတ်လုပ်သူသန်း သင်၏အစီအစဉ်များအောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်အသင့်ဖြစ်နေသည် လေ့လာချက် ကနေဒါသို့
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်၏အဖွဲ့ ကနေဒါကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သင့်အတွက်သတင်းပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အားပေးပို့ပါလိမ့်မည် ကနေဒါပညာရေးအပါအဝင် ကျောင်းသားဗီဇာ ကနေဒါအတွက် ကနေဒါလူနေမှုစရိတ် သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီကနေဒါနိုင်ငံရှိကုန်ကျစရိတ်များကိုကြိုတင်နားလည်ထားရန် ကနေဒါတက္ကသိုလ် လေ့လာရန်သို့မဟုတ် နောက်ထပ်တိုင်းပြည် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပိုကောင်းလိမ့်မယ် အခြားတိုင်းပြည်များကိုစစ်ဆေးပါ, အစား, ကေနဒါ
ကူညီပေးပါ စာရွက်စာတမ်းများ ဘို့ ကနေဒါတက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ကြီးကြပ်သည် သင့်အတွက်ဖြစ်စဉ် ကနေဒါတက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
တိုရွန်တိုတွင်လေ့လာပါ | Montreal တွင်လေ့လာပါ | Calgary တွင်လေ့လာပါ | Winnipeg တွင်လေ့လာပါ | ဗန်ကူးဗားတွင်လေ့လာပါ | ကွီဘက်မှာလေ့လာပါ
ကနေဒါနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးမိတ်ဖက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကနေဒါနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိအိမ်တစ်လုံးအောက်ရှိတတ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအမြဲတမ်းအကြောင်းကြားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကနေဒါအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကနေဒါ၌လေ့လာရန်အတွက် ၁ ချက်ဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာရှိသည်။
ကနေဒါအတွက်သင်၏ပညာရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများ ကနေဒါမှ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအဝင် တိုရွန်တိုရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Montreal ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Calgary မှ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Winnipeg ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဗန်ကူးဗားရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကွိဘက်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ကနေဒါတွင်လေ့လာသည် သင်ကနေဒါကိုပြောင်းရွှေ့သည့်အခါပထမသုံးလတွင်သင့်ကိုခွဲဝေပေးလိမ့်မည်။ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်သင့်အတွက်အဆက်အသွယ်ဖြစ်စေမည့်သူ၊ သင်၏ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကနေဒါ၊ ကနေဒါရှိအဆောင် / တိုက်ခန်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံသားအားလုံးသည်သင့်ကိုနားလည်ပြီးကနေဒါရှိအချိန်၊ ငွေနှင့်အားထုတ်မှုများကိုသက်သာစေသောသူတစ်ယောက်တည်းကစောင့်ရှောက်သည်
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကိုလိုက်ရှာသည် ကနေဒါတွင်ဝန်ခံချက်တစ်ဦးအတွက် တက္ကသိုလ် or ကနေဒါကောလိပ်ကျောင်းထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာ ကနေဒါကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အထူးထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
ငါတို့သည်လည်းကနေဒါနှင့်နိုင်ငံပေါင်း 105 အတွက်အခြားတက္ကသိုလ်များကိုပေး။
ကနေဒါနိုင်ငံရှိ One Stop Shop နှင့်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆
ကျွန်ုပ်တို့၏ကနေဒါရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာကျင့်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကနေဒါ၌သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမဆိုလုံ့လဝီရိယရှိရှိကျွမ်းကျင်စွာကျွမ်းကျင်ထားသူဖြစ်သည်။
အမေးအဖြေများ - ကနေဒါနိုင်ငံပညာရေး
ကနေဒါပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ကနေဒါမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကနေဒါတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဘယ်လိုပေးသလဲ။
ကနေဒါ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံကထောက်ပံ့ပေး ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံလည်းအဖြစ်လူသိများ ပြည်ပမှာကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါ၏ပင်လယ်ရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၏လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါတက္ကသိုလ်၏အတိုင်ပင်ခံ၊ ကနေဒါ၏အတိုင်ပင်ခံ။
ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ရရန် ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါ, ဘယ်လိုရရန် ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ ကနေဒါ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ထားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာကနေဒါ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ပြောပါ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် တိုရွန်တိုအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး , တိုရွန်တိုအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တို၌ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်တိုရွန်တိုအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တိုအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , တိုရွန်တို၌အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ နိုင်ငံခြားတိုရွန်တိုပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ တိုရွန်တိုရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ တိုရွန်တိုရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေးတို့။ Montreal အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Montreal ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Montreal ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Montreal ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Montreal အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Montreal ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် Montreal ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Montreal အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Montreal ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Montreal အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Montreal ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Montreal အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Montreal တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ Montreal ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများ၊ Montreal ရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံများ၊ Montreal ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ။ Calgary အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , နိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ Calgary , Calgary အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Calgary ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Calgary အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Calgary တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ Winnipeg များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Winnipeg အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg ရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Winnipeg များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Winnipeg အတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံများ၊ Winnipeg ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ။ ဗန်ကူးဗားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဗန်ကူးဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားရှိပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဗန်ကူးဗားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဗန်ကူးဗားအတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ကွိဘက်များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်၌နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကွိဘက်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်၌ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်ရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်ရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကွိဘက်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကွိဘက်၌အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ ကွီဘက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကွိဘက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကွိဘက်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကွိဘက်ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ကွိဘက်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ကွိဘက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်၏အတိုင်ပင်ခံ၊ တိုရွန်တိုပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ တိုရွန်တိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံခြားရှိတိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုရှိပြည်ပပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးပညာပေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုပညာရေးအကြံပေး၊ တိုရွန်တိုရှိနိုင်ငံခြားပညာအကြံပေးများ၊ ယနေ့တိုရွန်တို၌။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ Montreal ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ Montreal ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေး Montreal ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအကြံပေး၊ Montreal ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ Montreal ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ မွန်ထရီရယ်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ မွန်ထရီရယ်အတွက်ယနေ့။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအကြံပေးများ၊ နိုင်ငံခြားတွင် Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိလေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံခြား Calgary ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ Calgary ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအကြံပေးများနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဒီနေ့ Calgary ၌တည်၏။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ Winnipeg ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Winnipeg ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေး Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ၏အတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg တွင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား Winnipeg ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ Winnipeg ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ယနေ့ Winnipeg ၌တည်၏။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗန်ကူးဗားရှိလေ့လာမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ ဗန်ကူးဗားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗင်ကူးဗားရှိပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗင်ကူးဗားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ယနေ့ဗန်ကူးဗား၌တည်၏။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။
ဘာဖြစ်သလဲ LivingCanada ၏ကုန်ကျစရိတ် or လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်ကနေဒါ၏ကုန်ကျစရိတ် , ကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် အိန္ဒိယကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် or အာဖရိကမှကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်?
ကျနော်တို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ ကနေဒါလူနေမှုတွက်ချက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်သည် ကနေဒါလူနေမှုစရိတ်, ကနေဒါ၏လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်, ကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အခြေခံကျသည် ကနေဒါသတင်းအချက်အလက်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်.
တိုရွန်တိုတွင်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Montreal တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Calgary တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Winnipeg တွင်နေထိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ် | ဗန်ကူးဗားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ကွိဘက်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | တိုရွန်တိုတွင်နေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Montreal ရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုကုန်ကျစရိတ် | Calgary တွင်နေထိုင်ရန်တွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Winnipeg တွင်နေထိုင်သည် | ဗန်ကူးဗားရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် | ကွိဘက်ရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုကုန်ကျစရိတ်
ကနေဒါ၊ တက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်ကနေဒါ၊ တက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်ကနေဒါ၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ကနေဒါ၊ ၀ င်ခွင့်ကနေဒါ၊ ၀ င်ခွင့်ကနေဒါ၊ ဆေးတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်ကနေဒါ၊ MBBS ၀ င်ခွင့်ကနေဒါ၊ , မာစတာသင်တန်းတက်ခွင့်ကနေဒါ၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်အထောက်အပံ့ကနေဒါ၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ကနေဒါ ,?
ကျွန်တော်တို့၏ ကနေဒါမှအသိအမှတ်ပြုကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး ကနေဒါတွင်ဝင်ခွင့် သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည် စီးပွားရေးသင်တန်းဝန်ခံချက်ကနေဒါ, mba ဝန်ခံချက်ကနေဒါ, ကနေဒါဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ကနေဒါမာစတာသင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်, ကောလိပ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ကနေဒါကိုကူညီသည်, ကနေဒါဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကို, ကနေဒါဝန်ခံချက်, ကနေဒါဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ရန်, MBBS ဝန်ခံချက်ကနေဒါ, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ကနေဒါ, ဝင်ခွင့်ကနေဒါ, ကနေဒါကောလိပ်ဝန်ခံချက်အကူအညီ, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ကနေဒါ နှင့် ကနေဒါဝန်ခံချက်ဖွင့်လှစ်.
ကနေဒါတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (သို့) ကနေဒါအွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ကနေဒါကတက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ကနေဒါတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ကနေဒါတွင်အွန်လိုင်းပညာရေး or ကနေဒါအွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ကနေဒါများအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ဆက်သွယ်ပါ ကနေဒါတွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ကနေဒါနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
ကနေဒါအွန်လိုင်းသင်တန်းများတွင်တက်ရောက်ရန်ကနေဒါနိုင်ငံအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ပေးပါသလား။ ကနေဒါတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ရှိလျှင်ကနေဒါရှိအွန်လိုင်းပညာရေးကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ကနေဒါကတက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ကနေဒါတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ကနေဒါတွင်အွန်လိုင်းပညာရေး or ကနေဒါအွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ကနေဒါများအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မည်။ "
တိုရွန်တိုရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Montreal ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Calgary တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Winnipeg တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဗန်ကူးဗားရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ကွိဘက်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | တိုရွန်တိုရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | Montreal တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | Calgary တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | Winnipeg တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ဗန်ကူးဗားရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | ကွိဘက်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း
ဘို့ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်း တစ်ဦးအတွက် ကနေဒါတက္ကသိုလ်, ကနေဒါပညာရေး ဦး စီးဌာန or ကနေဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာန များအတွက်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးပါသည် ကနေဒါနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက် ၀ င်ခွင့်, ကနေဒါအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကက ကနေဒါမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးလိမ့်မည် ကနေဒါပြည်ပမှာလေ့လာပါ or ကနေဒါတွင်လေ့လာပါ။ ဒါ့အပြင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ ပညာရေးဦးစီးဌာန, ကနေဒါ / ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန, ကနေဒါ။
တိုရွန်တိုတွင်လေ့လာပါ | Montreal တွင်လေ့လာပါ | Calgary တွင်ပညာသင်ပါ | Winnipeg တွင်လေ့လာပါ | ဗန်ကူးဗားတွင်လေ့လာပါ | ကွီဘက်မှာလေ့လာပါ | တိုရွန်တိုရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Montreal ရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Calgary ၌ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Winnipeg တွင်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ဗန်ကူးဗားတွင်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ကွိဘက်၌နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ
ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာရရန်နှင့်ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာအတွက်မည်ကဲ့သို့လျှောက်ထားရမည်နည်း၊ ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာစည်းကမ်းများ၊ ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊
လျှောက်ထားရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ကနေဒါအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲနဲ့ အချိန်အဆက်အသွယ် ကနေဒါကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ.
ကျွန်ုပ်သည်ကနေဒါကျောင်းသား၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (သို့) ကျောင်းသားဗီဇာ (Canada visa) မှကနေဒါတက္ကသိုလ်သို့ ၀ င်ပြီးလျှင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ကျနော်တို့များအတွက်စည်းမျဉ်းများစာရင်းပြုစုပါပြီ ကနေဒါကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် အပေါ်က ကနေဒါကျောင်းသားများ၏အလုပ်လုပ်ခွင့် or ကနေဒါကျောင်းသားဗီဇာဝန်ခံချက်ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ကနေဒါတက္ကသိုလ်၌တည်၏။ အဖြစ်လူသိများ, ကနေဒါပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, education consultant in Canada, education consultancy in Canada, foreign education consultants in Canada, study abroad consultants in Canada, abroad education consultant in Canada, student consultant for Canada, education Consultancy in Canada, study consultancy in Canada, abroad education consultants in Canada, educational consultancy in Canada, global educational consultants in Canada, education consultant in Toronto , educational consultancy in Toronto , educational consultant in Toronto , foreign education consultants in Toronto , student consultants for Toronto , abroad education consultant in Toronto , overseas educational consultants in Toronto , university consultancy in Toronto , student Consultants in Toronto , abroad education consultants in Toronto , education consultancy in Toronto , foreign education consultancy in Toronto , study consultancy in Toronto , educational Consultants in Toronto , study abroad consultants in Toronto , abroad education consultants in Toronto , global educational consultants in Toronto , education consultants in Toronto , student consultant for Toronto , educational consultancy in Toronto education consultant in Montreal, educational consultancy in Montreal, educational consultant in Montreal, foreign education consultants in Montreal, student consultants for Montreal, abroad education consultant in Montreal, overseas educational consultants in Montreal, university consultancy in Montreal, student Consultants in Montreal, abroad education consultants in Montreal, education consultancy in Montreal, foreign education consultancy in Montreal, study consultancy in Montreal, educational Consultants in Montreal, study abroad consultants in Montreal, abroad education consultants in Montreal, global educational consultants in Montreal, education consultants in Montreal, student consultant for Montreal, educational consultancy in Montreal education consultant in Calgary , educational consultancy in Calgary , educational consultant in Calgary , foreign education consultants in Calgary , student consultants for Calgary , abroad education consultant in Calgary , overseas educational consultants in Calgary , university consultancy in Calgary , student Consultants in Calgary , abroad education consultants in Calgary , education consultancy in Calgary , foreign education consultancy in Calgary , study consultancy in Calgary , educational Consultants in Calgary , study abroad consultants in Calgary , abroad education consultants in Calgary , global educational consultants in Calgary , education consultants in Calgary , student consultant for Calgary , educational consultancy in Calgary education consultant in Winnipeg, educational consultancy in Winnipeg, educational consultant in Winnipeg, foreign education consultants in Winnipeg, student consultants for Winnipeg, abroad education consultant in Winnipeg, overseas educational consultants in Winnipeg, university consultancy in Winnipeg, student Consultants in Winnipeg, abroad education consultants in Winnipeg, education consultancy in Winnipeg, foreign education consultancy in Winnipeg, study consultancy in Winnipeg, educational Consultants in Winnipeg, study abroad consultants in Winnipeg, abroad education consultants in Winnipeg, global educational consultants in Winnipeg, education consultants in Winnipeg, student consultant for Winnipeg, educational consultancy in Winnipeg education consultant in Vancouver, educational consultancy in Vancouver, educational consultant in Vancouver, foreign education consultants in Vancouver, student consultants for Vancouver, abroad education consultant in Vancouver, overseas educational consultants in Vancouver, university consultancy in Vancouver, student Consultants in Vancouver, abroad education consultants in Vancouver, education consultancy in Vancouver, foreign education consultancy in Vancouver, study consultancy in Vancouver, educational Consultants in Vancouver, study abroad consultants in Vancouver, abroad education consultants in Vancouver, global educational consultants in Vancouver, education consultants in Vancouver, student consultant for Vancouver, educational consultancy in Vancouver education consultant in Quebec, educational consultancy in Quebec, educational consultant in Quebec, foreign education consultants in Quebec, student consultants for Quebec, abroad education consultant in Quebec, overseas educational consultants in Quebec, university consultancy in Quebec, student Consultants in Quebec, abroad education consultants in Quebec, education consultancy in Quebec, foreign education consultancy in Quebec, study consultancy in Quebec, educational Consultants in Quebec, study abroad consultants in Quebec, abroad education consultants in Quebec, global educational consultants in Quebec, education consultants in Quebec, student consultant for Quebec, educational consultancy in Quebec . Canada တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ.
ကနေဒါရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ကနေဒါရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ တိုရွန်တို၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or တိုရွန်တိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Montreal ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Montreal ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Calgary တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Calgary ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Winnipeg အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Winnipeg ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဗန်ကူးဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဗန်ကူးဗားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကွိဘက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ or ကွိဘက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ?
ဤရွေ့ကားများအတွက်အသုံးပြုကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည် ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံအခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ ကနေဒါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါတွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ကနေဒါပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကနေဒါပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
၀ င်ခွင့်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ ကေနဒါ
တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် Montreal ရှိတက္ကသိုလ်မှဝင်ခွင့် | Calgary တက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် | Winnipeg ရှိတက္ကသိုလ်မှဝင်ခွင့် | ဗန်ကူးဗားတက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် ကွိဘက်ရှိတက္ကသိုလ်တွင် ၀ င်ရောက်ခြင်း
နိုင်ငံခြားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး ဦး စီးဌာန
ပြည်နယ်နှင့်နယ်မြေဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ (www.canada.gc.ca/othergov/prov_e.html)
ကနေဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Gateway မှာ
မဟာဗျူဟာ - ကနေဒါ၏စီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်ဆိုဒ်
ကနေဒါအခွန်ရုံး - မူလစာမျက်နှာ
Destination Canada - ခရီးသွား ides ည့်လမ်းညွှန်များ
Waterton Glacier အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခြံ
အဆိုပါ Virtual ကိုးကားစရာစာကြည့်တိုက် - VRL
ကနေဒါအနုပညာကောင်စီ - Le conseil des des du Canada
Radio-Canada.ca - ဇုံယဉ်ကျေးမှု
Canlit - ကနေဒါစာပေမော်ကွန်းတိုက်
မနုologyဗေဒ MOA ၏ပြတိုက်
တော်ဝင် Tyrrell ပြတိုက်
နယူးပြင်သစ်၏ Virtual ပြတိုက်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ Institute က
Brock University က
အယ်လ်ဘာတာ၏ Concordia တက္ကသိုလ်မှကောလိပ်
descole des Hautes Études Commerciales
olecole de technologie supérieure, Université du Québec
nationalcole nationale d'administration publique, Université du Québec
Monite de Polytechnique, Monitéalတက္ကသိုလ်
အနုပညာ + ဒီဇိုင်း၏အမ်မလီ Carr က Institute
ကနေဒါ၏ပထမ ဦး ဆုံးနိုင်ငံများတက္ကသိုလ်
Instand Armand-Frappier, Université du Québec
National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Sudbury ၏ Laurentian တက္ကသိုလ်
မြို့ McGill University မှ
တောင်ပေါ်က Allison တက္ကသိုလ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် Nicola ချိုင့်အင်စတီကျု
နည်းပညာတက္ကသိုလ်မြောက်ပိုင်းအယ်လ်ဘာတာ Institute က
Nova Scotia စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်
အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း၏ Nova Scotia ကောလိပ်
Ryerson Polytechnic တက္ကသိုလ်
Simon Fraser University က
နည်းပညာတက္ကသိုလ်တောင်ပိုင်းအယ်လ်ဘာတာ Institute က
စိန့် Clair ကောလိပ်
စိန့်ဖရန်စစ် Xavier တက္ကသိုလ်
Tele-université, Université du ကျူးဘက်
Trent University က
Universitéက de Montreal
Universitéက de Sherbrooke
Chicoutimi မှUniversité du Québec
Rimouski àUniversité du Québec
Troy-RivièresàUniversité du ကျူးဘက်
Quitbec နှင့် Abitibi-Témiscamingueတက္ကသိုလ်
တက္ကသိုလ်Québec en Outaouais
ကိပ် Breton အဘိဓါန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်
အဆိုပါ Cariboo တက္ကသိုလ်ကောလိပ်
အဆိုပါ Fraser Valley ကိုတက္ကသိုလ်ကောလိပ်
Moncton, Edmundston တက္ကသိုလ်
Moncton, Shippagan တက္ကသိုလ်
နယူး Brunswick တက္ကသိုလ်
နယူး Brunswick, Saint John တက္ကသိုလ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်အွန် Institute ၏တက္ကသိုလ်
Prince Edward Island တွင်တက္ကသိုလ်
တိုရွန်တို, Scarborough တက္ကသိုလ်
Wilfrid Laurier တက္ကသိုလ်
ဝီလျံနှင့်ကက်သရင်း Booth ကောလိပ်
Imp ။ အင်ဖို - ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကနေဒါပညာရေး ဦး စီးဌာန / ကနေဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုသည်။